China Syringe Production Line Turnkey Project ndị na -emepụta ya na IVEN
1. Igwe ịkpụzi igwe
2. Igwe Ebipụta Oke
3. Ịgbakọta igwe
4. Igwe nkwakọ ngwaahịa otu onye: ngwugwu akpa PE/ngwugwu ọnya
5. Nkwakọ ngwaahịa nke abụọ & oriri
Usoro mmepụta niile nke sirinji nwere usoro isi isii:
1. Ịkpụzi gbọmgbọm
4. Nkwakọ ngwaahịa sirinji n'otu n'otu:
2. Mbipụta ahịrị nha gbọmgbọm
6. EO Mkpọrọ
Enwere nnukwu uru 4S ịkọrọ gị gbasara igwe anyị.
1.Dị ka nchekwa. Ejiri mkpuchi mkpuchi kpuchie igwe anyị, mgbe igwe na -arụ ọrụ, a na -emechi mkpuchi, mgbe mkpuchi mepere emepe, igwe ga -akwụsị ịgba ọsọ, nke na -egbochi onye ọrụ mmerụ ahụ yana agaghị enwe mmetọ uzuzu iji merụọ sirinji n'usoro.
2.Na -agba ọsọ.Ọ bụrụ naanị na ị na -eme atụmatụ ịgbanye igwe elekere 8 na mbido, mana ị na -enweta ọtụtụ iwu, yabụ ị na -eme atụmatụ ịgba ya awa 16 ma ọ bụ 24 kwa ụbọchị. Kedu ka ị ga -esi mee ya na -enweghị ezigbo igwe? Maka igwe anyị, ọ dịghị gị mkpa ichegbu onwe gị maka ya. Igwe anyị nwere ike na -agba ọsọ awa 24 kwa ụbọchị. Yabụ ị nwere ike ịme mgbanwe mmepụta dị ka ọchịchọ gị si dị. Ọ bụrụ n'ikpeazụ ọbụlagodi na ị na -agba ya awa 24 ezughi oke maka arịrịọ gị, kpatara ị nweta ọtụtụ iwu, nabata ịbịakwute anyị maka ahịrị nke abụọ ma ọ bụ ahịrị nke atọ.
3.Zọpụta ọrụ.Chekwaa ụgwọ ọrụ. PLC na -achịkwa ya kpamkpam. Igwe ejikọtara ọnụ. Ọ bụghị iche. Ọ nwere ike ịme mbipụta, na -agbakọta n'otu ahịrị ejikọtara. Enweghị mkpa ọrụ iji nyefee ya mgbe ebichara akwụkwọ. A ga -enyefe ngwaahịa ebipụtala nke ọma ka ọ gbakọta igwe na akpaghị aka.
4.Save ihe.Igwe anyị nwere ọnụego ruru eru. Ọ bụ karịa 99.9%. Ọ fọrọ nke nta ka ị ghara ịla n'iyi. Ngwaahịa tozuru oke, uru karịa.
Igwe Mbipụta Ahịrị Akara Sịga & Ngwakọta Ngwa
Sistemụ ime ụlọ dị ọcha
Nke gara aga: Agụụ ọbara nchịkọta tube turnkey osisi
Osote: Ụlọ dị ọcha